Dilkii Abaanduulihii Al-Shabaab Bashiir Qoorgaab oo Taliska AFRICOM xaqiijiyey - Awdinle Online
Dilkii Abaanduulihii Al-Shabaab Bashiir Qoorgaab oo Taliska AFRICOM xaqiijiyey
March 8, 2020 (Awdinle Online) –Taliska Ciidamada Militariga dalka Mareykanka ee Qaaradda Africa ee AFIRCOM ayaa xaqiijiyey dilka hoggaamiye sare oo ka tirsanaa Kooxda Al-Shabaab kaasoo duqeyn lagu dilay Bishii hore ee February.
Hadalka kasoo baxay Taliska Militariga AFRICOM ayaa lagu sheegay in Bashiir Maxamed Maxamuud oo afgarashadiisu tahay Bashiir Qoor-qaab lagu dilay duqeyn uu taliska AFRICOM fuliyey.
“Dhab ahaan waxaanu rumeysanahay in Bashiir Maxamed Maxamuud oo loo garan og-yahay Bashiir Qoor-qaab lagu dilay duqeyn uu taliska AFRICOM fuliyey,” ayuu yiri afhayeenka taliska Korneyl Chris Karns.
Afhayeenka ayaa sheegay in weerarkaas oo ahaa mid dhanka circa ah laga fuliyey Magaalada Saakow ee Gobolka Jubada Dhexe.
Wuxuu tilmaamay inuu weerarkaas dhacay 22-dii Bishii Februay ee sanadkaan 2020 tan iyo waqtigaasna uu socday baaritaan ku aadan xaqiijinta dhimashadiisa.
Dilka Hoggaamihayaan ayuu ku sheegay inay tahay horumar laga gaaray in meesha laga saaro khatarka ay Afirkaanka io Ameerikaanka kala kulmayaan Argigixisada sida hadalka loo dhigay.
“Tani waa hormay, waxay meesha ka saareysaa khatarta ay Afrikaanka iyo Ameerikaanka kala kulmayeen argagixisadda, waxayna dharbaaxo ku tahay cadowg” ayuu Korneyl Chris Karns u sheegay Idaacadda VOA.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in dilkaan uu suurtagalay kadib markii ay macluumaadka Sirdoon is dhaafsadeen Soomaaliya iyo Mareykanka.
Hoggaamiye Qoorgaab ayaa dhashay sanadkii 1982, wuxuuna xiriir dhow la lahaa hoggaanka Kooxda Al-Shabaab, waxayna dhimashadiisa saameyn ku yeelatay gudaha kooxda, wuxuuna kooxda ka hayey xilka abaanduulaha guud ee Al-Shabaab.
Sidoo kale Qoorgaab ayaa la sheegay inuu ahaa madaxii Howlgalada ee dalka Kenya halkaas oo Kooxda AL-Shabaab ka fuliyeen weeraro badan oo khatar geliyey amniga dalkaas, wuxuuna kamid ahaa golaha Fulinta.
Magacyadiisa afgarashada waxay kala ahaayeen;
Bashir Mohamed Mahmoud, Bashir Mahmud Mohammed, Bashir Mohamed Mohamud, Bashir Mohamed Mohamoud, Bashir Yare, Bashir Qorgab, Gure Gap, Abu Muscab, Qorgab.
Previous articleFarriin loo direy Hay’adaha Garsoorka mamulka Puntland
Next articleSheekh Shaakir ‘‘Ciidamadii loogu tala galay la-dagaalanka Al-Shabaab waxaa loo adeegsaday Hoggaanka Ahlusunna”